Betsaka ny Trano Amboarina Aorian’ny Horohoron-tany Tany Goatemalà sy Meksika
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tailandey Tiorka Tseky Vietnamianina Xhosa Yorobà
1 DESAMBRA 2017
Manomboka amin’ny 1 Desambra ilay asa be fanorenana, izay tombanana ho 10 tapitrisa dolara eo ho eo. Ireto avy ny asa hatao taorian’ireo horohoron-tany roa tany Goatemalà sy Meksika tamin’ny Septambra: Trano fonenana efa ho 500 sy Efitrano Fanjakana 16 no averina aorina, ary trano be dia be simba no amboarina.
MEXICO—Taorian’ny horohoron-tany roa tany Goatemalà sy Meksika, tamin’ny volana Septambra, dia nanao fanampiana vonjy rano vaky mitohy ny Komitin’ny Sampan’i Amerika Afovoany. Nanomboka tamin’ny 1 Desambra 2017 ilay asa be fanamboarana ny simba. Efa nandefa fanampiana vonjy rano vaky ny sampana, taorian’ny horohoron-tany avy hatrany. Nandefa rano, sakafo, fanafody, ary akanjo ho an’ny mpiara-manompo tratran’ny loza izy ireo. Hifantoka amin’ny fanamboarana ny Efitrano Fivoriambe, Efitrano Fanjakana, ary tranon’ny mpiara-manompo ny fanampiana manaraka.
Rahalahy sy anabavy 655 avy ao Chiapas sy Oaxaca no tsy maintsy nafindra toerana, taorian’ilay horohoron-tany nirefy 8,2 tamin’ny 7 Septambra. Izao àry no kasaina hatao any amin’ireo tanàna roa any Meksika ireo: Hamerina hanorina trano fonenana 315 sy Efitrano Fanjakana 15. Ireto kosa no simba ka hamboarina: Trano fonenana 1 039, Efitrano Fanjakana 108, Efitrano Fivoriambe 3.
Rahalahy sy anabavy 463 avy ao amin’ny tanàn-dehiben’i Mexico sy ny faritr’i Mexico, Morelos, ary Puebla no tsy maintsy nifindra toerana, taorian’ilay horohoron-tany nirefy 7,1 tamin’ny 19 Septambra. Trano fonenana 158 no haverina haorina ary ny mila fanamboarana kosa, trano fonenana 600, Efitrano Fanjakana 39, ary Efitrano Fivoriambe iray.
Tany Goatemalà indray, rahalahy sy anabavy 36 no tsy maintsy nifindra toerana vokatr’ilay horohoron-tany tamin’ny 7 Septambra. Hamerina hanorina trano fonenana sivy sy Efitrano Fanjakana iray ny mpanao fanorenana sy ny mpiasa an-tsitrapo eo an-toerana, ato anatin’ny volana vitsivitsy. Hanamboatra ny simba amin’ny trano 20 sy Efitrano Fanjakana 4 koa izy ireo.
Araka ny tombantomban’ny Komitin’ny Sampana, dia 10 tapitrisa dolara latsaka kely no ho lany amin’ireo fanampiana ireo. Komitin’ny vonjy rano vaky 39 no hikarakara an’izany ary haharitra dimy ka hatramin’ny enim-bolana ny asa. Mpanao fanorenana 30 eo ho eo no efa miomana ho any amin’ny toerana nitrangan’ny loza, ary olona 970 mahery no nanolo-tena an-tsitrapo hanampy amin’ny fanorenana. Matoky isika fa hotahin’i Jehovah ny asa sy toe-tsaina asehon’ireo “handray anjara amin’ilay fanompoana” ny mpiara-manompo tra-boina—2 Korintianina 8:4.
Maneran-tany: David A. Semonian, Biraon’ny Filazam-baovao, +1-845-524-3000
Goatemalà: Juan Carlos Rodas +502-5967-6015
Horohoron-tany Mahery Vaika Tany Meksika
Nampihovotrovotra An’i Meksika Afovoany ny Horohoron-tany 7,1 Amin’ny Maridrefy Richter